Hello Nepal News » एथ्लेटिकोविरुद्ध ‘तुफानी टिम’को खोजीमा बार्सिलोना : यस्तो हुनेछ सम्भावित प्लेइङ–११
एथ्लेटिकोविरुद्ध ‘तुफानी टिम’को खोजीमा बार्सिलोना : यस्तो हुनेछ सम्भावित प्लेइङ–११
एजेन्सी, असार १६
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति दोस्रो स्थानको बार्सिलोना र तस्रो स्थानको एथ्लेटिको मड्रिडको रोमाञ्चक भिडन्त हुँदैछ । खेल नेपाली समयअनुसार राति १ः४५ बजेबाट बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा सुरु हुनेछ । यसअघि भएको सिनजको पहिलो खेलमा बार्सिलोनाले एथ्लेटिकोलाई उसकै घरमा ०–१ ले हराएको थियो । यता, यसै सिजन एथ्लेटिकोले स्पेनिस सुपर कपको सेमिफाइनलमा बार्सिलोनालाई हराएर उपाधि सपना चकनाचुर बनाइदिएको थियो ।
उपाधि होडमा लिग लिडर रियल मड्रिडभन्दा २ अंकले पछि परेको बार्सिलोना अहिले कमजोर अवस्थामा मात्रै छैन, ड्रेसिङ रुममा पनि झमेला झेलिरहेको छ । पछिल्ला खेलको प्रदर्शन र नतिजाका कारण बार्सिलोनामा अहिले प्रशिक्षक र खेलाडीबीच तनाव चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आज राति हुने सिजनको एक ठूलो भिडन्तमा प्रशिक्षक क्विके सेटिनले कस्तो टोली उतार्छन् र कस्तो नतिजा निकाल्छन् भन्नेमा धेरैको चासो छ । आज राति एथ्लेटिकोविरुद्ध उत्रिने बार्सिलोनाको सम्भावित टोलीबारे चर्चा गरिएको छ ।
डिफेन्स – बार्सिलोनाको रक्षापंक्ति सम्हाल्ने एक प्रमुख क्लेमेट लेङलेट आज राति उपलब्ध हुनेछन् । उनले सामुएल उम्टिटीलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन् । उनलाई जेरार्ड पिकेले साथ दिनेछन् । साथै, नेल्सन समेडो र जोर्डी अल्बामध्ये एकले सुरुआतमै स्थान बनाउने पक्का छ । रक्षापंक्तिमा धेरै परिवर्तन भने हुने सम्भावना छैन । किनभने, सर्जी रोवेर्टो हालै चोटमुक्त हुँदै आएका छन् । उनी बेन्चमै रहन सक्छन् भने आजको खेलमा प्रशिक्षक सेटिनले जुनियर फिर्पोमाथि विश्वास गर्ने सम्भावना पनि न्यून छ ।
मिडफिल्ड – अघिल्लो खेलमा अर्थुर मेलोको स्थान लिएका युवा खेलाडी रिकी पुचले आजको खेलमा पनि सुरुआती टोलीमा स्थान बनाउलान् ? सेल्टा भिगोविरुद्ध उनले जुन प्रदर्शन गरे, त्यस आधारमा उनले आज एथ्लेटिकोविरुद्ध पनि सुरुआती टोलीमै स्थान बनाउने हक राख्छन् । सेटिनले उनलाई आज पनि विश्वास गरेर मौका दिने प्रबल सम्भावना छ ।
यता, सर्जियो बुस्केट्स प्रतिबन्ध पूरा गरेर आजैको खेलबाट टोलीमा फर्किनेछन् । उनीसहित इभान राकिटिकले आजको खेलमा सुरुआत गर्न सक्छन् । यसअघि पनि उनी सुरुआतमै थिए । यता, अर्टुरो भिडालले पछिल्ला तीन खेलमा सुरुआत गरेकाले आजको खेलमा उनलाई बेन्चमा राख्ने सम्भावना छ । अर्का प्रमुख खेलाडी फ्रेन्की डे जोङ घाइते अवस्थामा छन् ।
आज सेटिनसँग हालै युभेन्टसमा अनुबन्ध भएका अर्थुर मेलो पनि उपलब्ध हुनेछन् । तर, उनी कप्तान लिओनल मेस्सीको प्राथमिकतामा नपर्ने हुँदा सेटिनले उनलाई यस खेलमा बेन्चमै राख्ने सम्भावना छ । उनी अघिल्लो दिन मात्रै सरुवा प्रक्रिया पूरा गरेर बार्सिलोना फर्किसकेका छन् । उनी युभेन्टसमा अनुबन्ध भइसके पनि यो सिजनभर बार्सिलोनाका लागि खेल्नेछन् ।
आक्रमण लाइन – अघिल्लो खेलमा सेल्टाविरुद्ध २ गोल गरेका लुइस स्वारेज आज पनि सुरुआतमा पर्नेमा शंका छैन । सेल्टाविरुद्धको खेलपछि स्वारेजले प्रशिक्षक सेटिनको खुलेरै आलोचना गरेका थिए । स्वारेजसँगै कप्तान मेस्सीले आक्रमण लाइनमा कमान्ड गर्नेछन् । मेस्सीले लिगका पछिल्ला तीन खेलमा गोल गर्न सकेका छैनन् । आज उनी घरेलु मैदानमा उत्रिँदा चर्को दबाबमा हुनेछन् ।
यता, आक्रमण लाइनमा सेटिनसँग युवा स्टार अन्सु फाती, मार्टिन ब्रेथवेट र एन्टोनी ग्रीजम्यान हुनेछन् । मेस्सीको चाहनाअनुसार एथ्लेटिकोविरुद्ध फातीलाई राख्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ । तर, ग्रीजम्यान एथ्लेटिकोका पूर्वखेलाडी भएकाले अनुभवका आधारमा पनि सेटिनले आज ग्रीजम्यानलाई सुरुआतमै उतार्ने सम्भावना धेरै छ । त्यसो भने सुरुआती आक्रमण लाइनमा ‘एमएसजी’ अर्थात् मेस्सी, स्वारेज र ग्रीजम्यान हुनेछन् ।
बार्सिलोनाको सम्भावित प्लेइङ–११ (१–४–३–३)
गोलकिपर – मार्क आन्द्रे टर स्टेगेन
डिफेन्डर – नेल्सन सेमेडो, जेरार्ड पिके, क्लेमेट लेङलेट, जोर्डी अल्बा
मिडफिल्डर – इभान राकिटिक, सर्जियो बुस्केट्स, रिकी पुच
फरवार्ड लाइन – लिओनल मेस्सी, लुइस स्वारेज, एन्टोनी ग्रीजम्यान
प्रकाशित मिति १६ असार २०७७, मंगलवार ०९:०१
आज क्याटलान डर्बी भिडन्त : बार्सिलोनालाई २०औं स्थानको इस्पानयोलको चुनौती
प्रिमियर लिग : आर्सनल र लेस्टर सिटीको बराबरी
ला लिगा : सेल्टा भिगो र एथ्लेटिको मड्रिडको बराबरी
सिरी ए : युभेन्टसमाथि एसी मिलानको सनसनीपूर्ण कमब्याक जित !
एसी मिलान भर्सेस युभेन्टस : पहिलो हाफमा बराबरी
१८औं स्थानको लेचेले लाजियोलाई हरायो : उपाधि युभेन्टसलाई जिम्मा !
प्रिमियर लिग : रोमाञ्चक खेलमा चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेसलाई हरायो
बार्सिलोनाले भन्यो– ‘नेइमार फर्किने कुनै सम्भावना छैन’
युभेन्टसलाई चोट र प्रतिबन्धको पिरलो : यस्तो हुनेछ एसी मिलानविरुद्ध प्लेइङ–११
‘लिम्पियाधुरा भारतको भूमि’ भन्ने सरिता गिरीको सांसद पद उड्यो, पार्टीबाट पनि आउट !
२४ घन्टामा ६ सय ८८ जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किए : हालसम्मकै उच्च
नेपालमा थप १८० जनामा कोरोना संक्रमण : २६४ निको भएर घर फर्किए
२४ घन्टामा २७२ जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किए
नेपालमा थप ४७३ जनामा कोरोना पुष्टि : काठमाडौंमा २८ जना भेटिए
नेपालमा थप ४८२ जनामा कोरोना संक्रमण : १४ हजार नाघ्यो
नेपालमा थप ३१६ जनामा कोरोना पुष्टि : काठमाडौंमा १२ जना
नेपालमा थप ४७६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि : कुन जिल्लामा कति ?
विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ करोड नाघ्यो : मृतक ५ लाख नाघे